Akupunktur hahavery lanja | Sakafo Nutri
Akupunktur ho an'ny fihenan'ny lanja
PaÃ¼ Heidemeyer | | soso-kevitra, fahasalamana
Betsaka ny olona mitady fomba mampihena lanja amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena, sakafo, kapsily, anana, menaka ary koa miorina amin'ny akupunktur. Hodinihintsika hoe inona izany ary raha tena miasa tokoa ny mampihena ny lanjany.
La acupuntura Fomba fanao izay ampiasaina hitsaboana aretina isan-karazany, teknika fanoloana izay mety hahasoa olona maro.
Ny tsindrona volamena mandrisika faritra sasany amin'ny vatana Amin'ny alàlan'ny fanindronana kely amin'ny fanjaitra dia mampavitrika faritra sasany izy ireo hanamaivanana ny fanaintainan'ny aretina mitaiza, na tsy mahazo aina amin'ny hozatra sy tonon-taolana. Ny fanaintainana dia tsy maharary ary mety hahasoa ny olona marobe.
1 Akupunktur ho an'ny fihenan'ny lanja
2 Fomba fitsaboana akupunktur amin'ny fihenan'ny lanja
3 Ireo teboka hametrahana ny fanjaitra
Si buscas manavesatra Ary te hanandrana an'ity teknika taloha ity ianao hanatrarana azy, holazainay aminao hoe inona no misy ny fitsaboana ary inona no vokatr'izany. Ny tena mazava dia noho ny fiakaran'ny acupuncture ny vatantsika dia mahazo mikoriana bebe kokoa ary mamelombelona ny heriny, ka mahatonga ny kaloria bebe kokoa hodorana, izay mahatonga ny fihenan'ny lanja.
Ny tsindrona volamena Mety ho ilaina ny mitsabo aretina na aretina sasany:
Ahenao ny fahazotoan-komana.
Ampitomboy ny metabolisma ny zavamananaina.
Mahatonga antsika hanana bebe kokoa Angovo.
Mahatonga antsika handoro bebe kokoa kaloria.
Ahenao ny adin-tsaina.
Izy io dia mety amin'ny olona miaraka fanahiana.
Mandrisika ny fifanampiana ny zavamiaina manontolo.
Mandrisika ny ra mivezivezy.
Aza atao mitazona rano.
Izy io dia mitazona antsika ho salama ara-tsaina, hisoroka fahaketrahana.
famotsorana endorphins ary ny hormonina an'ny fahasambarana.
Fehezo ny komana ary ny fahatsapantsika ny satiety.
Manampy amin'ny fifehezana ny hetsika tsinay, manala ny fitohanana indraindray.
Manala aina antsika izany ary manakana antsika tsy hanana fizarana tsy fahitan-tory.
Ireo antony rehetra ireo dia manazava ny antony mahatonga ny vatana ho malina kokoa sy ho tony kokoa amin'ny fanaovana sakafon-tsakafo nefa tsy mitebiteby momba ny sakafo na sakafo voarara.
Ny akupunktur dia tokony hampiasaina ho famenony emaciation ary tsy ho loharano tokana hampihena ny lanja, satria raha ampiasaina ho toy ny refy tokana dia azo antoka fa tsy hahatratra ilay tanjona. Mba hahavery ny lanja sy hampihena ny lanja ara-pahasalamana dia mila manaraka torolalana vitsivitsy fantatry ny maro amintsika isika:
Manantona dokotera na manampahaizana manokana momba ny toe-javatra misy anay sy ny fikasantsika hampihena ny lanjany mba hotoroana torohevitra sy torohevitra mandritra ny fomba.
Mila mitondra a sakafo mahavelona.
Aza misakafo nendasina, nokapohina, feno tavy na masira be.
Ampitomboy ny fihinanana voankazo y legioma y kofehy.
Manaova fanatanjahan-tena antonony, safidio ny fanatanjahan-tena tianao indrindra hiaraka aminao mandritra ny fahaverezan'ny kilao.
Tsy maintsy mametraka tanjona sy fotoana misy zava-misy isika, tsy misy ny fahagagana ary kely kokoa ny sakafo fahagagana.
Fomba fitsaboana akupunktur amin'ny fihenan'ny lanja
Ity teknika ity dia fantatra amin'ny hoe auriculotherapy, satria ny fanjaitra dia apetraka ao amin'ny sofina sy any amin'ny faritra hafa amin'ny vatana. Amin'ity karazana akupunktur ity dia afaka mandrisika ireo faritra samihafa amin'ny vatana isika izay manampy antsika tsy hanana fihenjanana na fanahiana, famotsorana endorphins ary fahatsapana fitoniana sy fialan-tsasatra.
Amin'ny lafiny iray, mahasoa ny fahatsapana ho voky rehefa misakafo, noho izany dia ho vitsy ny sakafo sy sakafo hanintsika, manampy antsika hihena.
Mba hahasoa sy hanampiana antsika tokoa ity teknika ity dia mila mandinika lalina isika mba hamaritana ireo antony hihinanantsika sakafo tsy mahasalama, tokony ho azo antoka isika ary tena te hihena tokoa. fenoy ny tanjona. Ilaina ny finiavana hahatratra izany, ary koa ny fikirizana ary fahazarana mahasalama.
Ireo teboka hametrahana ny fanjaitra
Faritra afovoan'ny orja.
Ny tombony lehibe amin'ny akupunktur dia ny hoe tsy mila mampifangaro azy amin'ny fomba fitsaboana hafa isika, izany hoe, tsy mila fanafody izany fa mila manatona manam-pahaizana manokana izay mifehy ny teknika vao mahazo tombony. Azo antoka fa ao amin'ny tanànanao na tanànanao dia misy manam-pahaizana manokana amin'ity teknika ity.
Ny olana iray manohitra dia ny fahatratrarana vokatra mahasoa dia mila fikirizana sy faharetana isika ka ny valiny dia misy vokany eo amin'ny vatantsika. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, tsy maharary ny akupunktur, na izany aza, ireo fanjaitra kely ireo dia mety hanisy ratsy antsika, raha izany no anao dia tsy maintsy manatona ny dokotera ianao mba hiresaka izany.
Ny torohevitray dia ny hoe raha sahy manao sesim-pananahana ianao dia avelao ny dokotera sy ny manam-pahaizana manokana hanome torohevitra anao. Tokony hifanaraka ianao ary ampiasao ireo fivoriana ireo mba hialana sasatra sy hiaraka amin'ny saina malalaka ho lehibe kokoa ny vokany.
Hamarino tsara fa ny afovoany izay alehanao dia mampiasa fanjaitra vaovao isaky ny fotoam-pivoriana, ny fanjaitra izay ampiasaina dia azo atsipy ary tokony hariana any amin'ny faran'ny fivoriana tsirairay. Ity karazana acupuntura Fanampiny ny fihenan-danja araka ny efa nolazainay teo aloha, tsy ny teknika fahagagana akory no hahatonga anao ho very kilao rehetra.
Raha sahy mihena lanja ary te hanandrana teknika hafa no anoroanay anao mikaroka fampahalalana bebe kokoa ianao ary manontany manam-pahaizana manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Akupunktur ho an'ny fihenan'ny lanja
Mihabe ve ny fantsona?